Periodontist Bleeding Gums | Optismile Yepamberi Dentistry muCape Town
Chii chinonzi Periodontist? Zvishoma nezvedenda reGum…
A periodontist inyanzvi yemazino ine advanced training. Nyanzvi mukuongororwa uye manejimendi yezvirwere zvese zvinokanganisa nyama-inotsigira matishu. Izvi zvinozivikanwa nesainzi seye periodontal tishu, iyo inongoreva matadza uye pfupa rakakomberedza mazino ako.
MaSouth Africa periodontists akasarudzika uye anoonekwa sevanoona nezvema dermatologists uye vanovhiya epurasitiki ezvinyama zvemumuromo! Iyo 4-gore postgraduate chirongwa chinovimbisa hunyanzvi mukudzivirira kwezvirwere uye chirwere chematadza. Periodontists vanoitawo hunyanzvi hwekuzvivandudza uye hwekuvakisa wakakomberedza mazino uye zvinodyarwa. Periodontists akadzidziswa nyanzvi pakuiswa uye kugadziriswa kwemazino anodyara.
Zviratidzo zveGamu Chirwere
Tsvuku, kuzvimba kana nyoro matadza
Marwadzo mumuromo mako
Kubuda ropa uchikwesha, kupuruzira, kana kudya
Matadza ari kudzikira kana kudhonza kubva pameno, zvichikonzera kuti mazino ataridze kureba kupfuura pakutanga
Kufambira mberi kusunungura kana kusimuka kwemeno
Pus pakati pemazino ako nemeno
Maronda mumuromo mako
Kuramba kwakaipa kufema
Kuchengetwa kwemuromo kwakanaka uye nehunyanzvi hwekuchenesa yega mwedzi mitanhatu inokurudzirwa kubatsira kudzivirira chingamu chirwere uye kuchengetedza muromo une hutano Hutachiona hunogona kuvaka nekukonzeresa hutachiona mumatadza ayo anogona kuzotsva otanga kubuda ropa. Panguva ino, inozivikanwa segingivitis, uye inogona kugadziriswa zviri nyore, asi kana ikasiiwa isina kuchengetedzwa, inozokanganisa masisitendi ekutsigira uye inokonzeresa chirwere chenguva, chinoda kurapwa uye manejimendi kubva kune anoteya nguva. Kubuda ropa matadza kunogona zvakare kuendesa mweya wakaipa.
Maitiro Atinogona Kukubatsira Iwe: Nezve Periodontist muCape Town
Nzvimbo yakanakira yekutanga ndeye kubhuka yakachena yekuchenesa mazino neyedu Dental Hygienist . Kana matambudziko ako ematinamu aine chekunetsekera kune mumwe wevanoziva nezvehutsanana, unozoendeswa kuna Periodontist, kubvunzurudzwa pamwe nekurapwa zvakare. A periodontist akaenderera mberi nekudzidziswa mune mashoma anovhiringidza mazino ekuisa kurapwa, ekuvandudzwa kwe periodontal kuvhiyiwa, oparesheni yekuvhiya kwepurasitiki kunoenderana neuchapupu hwazvino hwesainzi kuona kuti varwere vake vanowana kurapwa kwakaringana.